In Somali - Ku qoran Somali | Suomen Partiolaiset
Suomen PartiolaisetFAQIn Somali – Ku qoran Somali
Macluumaadka ku saabsan hobiga Scouting-ka Finland ku hel Somali
Waa kuwan su’aalaha badanaa la iska waydiiyo iyo jawaabahooda Scouting-ka Finland.
Sidee looga mid noqdaa Hagista iyo ‘Scouting’-ka Finland?
Waxaad ku biiri kartaa adigoo la xiriiraya Hagahaaga iyo ‘Scout’kaaga degmada. Waxaad ka heli kartaa khariidada degmada halkan.
Ma ku biiri karaa haddii aanan ku hadlin Finnish?
Inta badan hawlaha Hagista iyo ‘Scouts’ka ayaa hadda lagu abaabulay Finnish and Swedish.
Laakiin kooxo kasta oo maxalli ah ayaa sidoo kale wax u qabta dadka waaweyn iyo dhalinyarada ku hadla English ama luqadaha kale. Ciidamada maxalliga ahi way kala duwan yihiin, laakiin markaad weydiisato agtaada waxaad ka heli kartaa meel kugu habboon! Mid ka mid ah ikhtiyaarka caanka ah ee dadka waaweyni waa inay u dhaqmaan sidii hoggaamiye kooxeed iyo hoggaamiye kale oo ku hadla Finnish. Dabeecad wanaagsan iyo rabitaanka adeegsiga aaladaha turjumaanka ayaa ku caawiya!
Carruurtaydu ma ku biiri karaan haddii aysan ku hadlin Finnish?
Haa, waa suurtogal inay awoodaan! Hagista iyo ‘Scouts’ku waa hab fiican oo ay carruurtu ku baran karaan luuqadda kuna dhex biiri karaan dhaqankaaga cusub ee maxalliga ah iyagoo baashaalaya! Lahaanshaha dhiirrigelinta wax -barashada hubaal way ku caawinaysaa! Way kala duwan tahay in kasta oo waxay kuxirantahay ciidamada deegaanka iyo xirfadaha luuqadda hogaamiyaha kooxda mutadawiciinta. Ma ballan qaadi karno in waxqabadyada lagu bixin doono af (af) shisheeye, laakiin had iyo jeer waa mudan tahay in la is weydiiyo!
Ma ku biiri karaa diintayda ha ahaato?
Haa, waad awoodaa! Qof kasta wuu ku biiri karaa iyadoon loo eegeynin isirka ama dhaqanka, luqadda, diinta ama caqiidada, awoodda jireed, aqoonsiga jinsiga, matalaadda jinsiga, ama jisiyada galmada.
Dhaqdhaqaaqa Hanuuninta iyo ‘Scouting’-ku waa mid madaxbannaan, diin ahaan, iyo siyaasad ahaanba aan la safanayn sidoo kale aan macaash doon ahayn. Xubin kasta wuxuu xor u yahay inuu ku dhaqmo diintiisa.
Fadlan ogow in ciidammada maxalliga ah ee kala duwan ay leeyihiin ururo taageera oo kala duwan iyo caadooyin kala duwan. Ciidamo badan oo maxalli ah waxay leeyihiin Kaniisadda Evangelical Lutheran oo ah beesha taageersan. Tani inta badan laguma arko waxqabadyada, laakiin aagagga kulanka waxaa laga yaabaa inay shirka bixiyaan. Kala hadal mawduucan hoggaamiyaha kooxda deegaankaaga.
Waa imisa qiimaha? Ma hiwaayad la awoodi karo baa?
Hagista iyo ‘Scouting’-ka Finland waxaa loo qaadan karaa hiwaayad la awoodi karo. Lacagta xubinnimada sanadlaha ah waa qiyaastii 60-80 euro. Lacag -bixinta waxaa ka mid ah khidmadaha xubinnimada ee Hagayaasha iyo ‘Scouts’ -ka Finland iyo Degmada Scout. Kooxaha deegaanka qaarkood ayaa laga yaabaa inay ururiyaan khidmad xubinnimo oo gooni ah.
Lacag dheeraad ah oo la awoodi karo oo loogu talagalay xeryaha/safarada/socodka. Loogu talagalay in lagu daboolo kharashyada cuntada. Iyadoo ku xiran kooxda deegaanka.
Ma tabaruc karaa?
Haa, waad awoodaa! Hagayaasha iyo ‘Scouts’ -ku waxay soo dhoweynayaan mutadawiciin cusub si ay gacan uga geystaan ​​hawlahayaga. Waxaad la xiriiri kartaa degmadaada agtaada ah si aad u ogaato nooca fursadaha iskaa wax u qabso ee aaggaaga ka jira. Tabarucayaasha ku jira Hagayaasha iyo ‘Scouts’-ku waxay noqon karaan tusaale ahaan hoggaamiye kooxeed, qabanqaabiyayaal dhacdooyin ama cunto kariye inta lagu jiro xerooyinka. Uma baahnid inaad yeelato xirfado gaar ah, dhiirigelin si aad ula shaqayso dadka kale oo aad wax u barato samaynta ayaa ka muhiimsan. Waxaad ka heli kartaa khariidada degmada halkan.
Dadka qaangaarka ah oo u shaqeeya mutadawacnimo u saamaxaya hiwaayadda carruurta iyo dhallinyarada ayaa loo tixgeliyaa inay yihiin xubno ka mid ah Hagaha iyo ‘Scouts’-ka Finland. Dhammaan xubnaha ayaa bixiya khidmadda xubinnimada. Beddelkeeda waxaad helaysaa:
tacaburidda, fursadaha waxbarasho, koorsooyinka, iyo taageerada ka timaadda asaaggaaga, oo ah bulsho ay isku dad yihiin.
Qalab noocee ah ayaa loo baahan yahay?
Labiska Scout-ka waxaa ku jira mara-qooreed ‘Scout-ka’ iyo shaatiga ‘Scout-ka’. Uma baahnid inaad hore u soo iibsato. Waxaad ka heli doontaa macluumaad ciidankaaga maxalliga ah sida loo helo kuwa marka aad ku biirto.
Qalabka xerada. Qaar ka mid ah qalabka aasaasiga ah ayaa loo baahan yahay safarada dibadda. Fadlan ogow in sidoo kale la amaahan karo, la kiraysan karo, ama la iibsan karo gacan labaad!
Qalabka caadiga ah ee loo baahan yahay safarada dibadda:
Kabo adag oo aan biyuhu marin
Dharka aan biyuhu marin
Miyaa aniga /ilmahaygu hore u haystaa xoogaa xirfado gaar ah?
Adiga/ilmahaagu uma baahnid wax xirfado horudhac ah ama aqoon ah ka hor intaadan ku biirin Hagayaasha iyo ‘Scouts’ka Finland. Waxa kaliya ee aad u baahan tahay waa xiisaha, iyo rabitaanka barashada iyo la qabsiga. Ku Biirista Hagayaasha iyo ‘Scouts’ka Finland waa hab fiican oo lagu kobcin karo xirfadahaaga, wax loo baro dadka kale loona noqdo qayb ka mid ah bulshada. Dhammaan waxaad u baahan tahay inaad ogaato ayaa lagu bari doonaa, tallaabo tallaabo.
Macluumaad dheeraad ah oo Ingiriisi iyo Finnish ah: Petra Valkonen petra.valkonen(a)partio.fi
Sawir: Eeva Helle